Germany paTitanic kosi: gara wakarurama uye unogara wakanganisa
Gara uchiruramisa uye uchigara uchitadza
Ndiani akakunda sarudzo?
Izvo vanhu vakakosha ava vane zvakafanana mukuomerera kwavo, kugona kwavo uye kushaya kwavo misimboti. Hapana kana mumwe wavo akamboshinga kupokana nehurongwa hwaMerkel mune imwe chete nguva.
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 3 mavhiki 3 mavhiki
Kupenga kwejekiseni kunobata vana
Zano rekudzivirira rinoteverwa nehurumende kuvana nevechiri kuyaruka uye kubata vabereki chikamu chekuedza kuruboshwe-kurasa kuputsa mhuri mune basa rayo rekare nebasa uye kuchengeta vana kubva mumaoko evabereki (muchato zvese / chirongwa cheGender / vashoma mutemo).
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 2 mwedzi 2 mwedzi
Kune vasina kuchena
Usatye. Iwe unoratidza kushinga, kuvimbika, uye kutsunga. Muchaungana munharaunda menyu, moita zvirongwa zvekubatsirana, nekukurudzira kuzvidavirira kwesainzi uye rusununguko rwekutaura izvo zvakakosha kuti nzanga ibudirire.
Hupenyu hwezuva nezuva hunouunza kuchiedza: Vatongi vane vanozvipira. Haifanire kugara iri mapurisa anopindira neushingi. Yaimbodaidzwa kunzi Blockwart!
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 3 mwedzi 2 mwedzi
Desiderius Erasmus Nheyo
Isu hatisi ivo AfD, asi zvirokwazvo tiri padyo nayo nekuda kwekutenda. Uye semunhu asiri bato, ini ndinotsigira pachena chokwadi chekuti ini ndinovhotera iyo AfD, nekuti inomira uye inoita maererano neMutemo wekutanga. Zvikasadaro ini ndaisazovavhotera uyezve kusatungamira hwaro uhwu. Iyo AfD iri kupomera matanho aripo edziviriro yebumbiro nechikonzero chakanaka. Maitiro ayo akaongororwa nehunyanzvi, iyo hurumende yemubatanidzwa inozokundwa mushure memakore emaitiro. Uye zvakanaka!
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 3 mwedzi 3 mwedzi
Kugovana uye kubatana kuGerman
Vanhu vakanyarara here? Zvinotaridza kuti hapana kupikisa kune simba kune iyi isingataurike mutemo wekukanganisa. Asi chete kana iwe uchitenda, sevatongi vakuru nevadiki, kuti pfungwa dzese dzinofungidzirwa dzinofanirwa kuve dzechokwadi muhupenyu hwavo, vanofunga nenzira iyoyo. Kune zviitiko zvepasi pevhu munharaunda zvakapfupika, asi kazhinji zvehurefu hwakareba. Shanduko hombe dzinoda nguva yakareba yekukura.
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 3 mwedzi 3 mavhiki
Vakadzi mumitambo yevarume nevamwe
Zvinenge zvisina njere kutora fungidziro yekupinda kwevakadzi munzvimbo yemurume - kunyanya panguva yemakwikwi eEuropean. Kwete - chirongwa chezvematongerwo enyika chekudzidzisa zvakare. Tinofanira kujairira nenyaya yekuti vakadzi varume uye varume vakadzi. Zvese zvinogoneka uye hapana chechikadzi chakanangana. Chero murume kana mukadzi anogona kuita zvese zvakanaka kana zvakaipa seimwe.
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 3 mwedzi 4 mavhiki
GDR saddle pad inodzima GG democracy
Mapato akabatana eMerkel haazive mamiriro ezvinhu, hapana pekutangira, hapana nheyo uye hapana masheya anoda kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa. Chete vavariro dzakanaka, zvishuwo uye zviroto zvinonongedza nzira kune ramangwana rinoshuvira rinoenderana nevanhu vese nemarudzi uye neakasikwa uye ehupenyu chaiwo. Zvekare zvakare, utopia inopemberera kumutswa kwayo nyowani kubva kumatongo uye chero munhu anoipikisa inonyura zvisina mutsindo mukamuri.
Shanduko ipi yatiri kutaura nezvayo?
Mamiriro ekunze kuGermany ari kuramba achiwedzera kuipa. Kwete chete inonzi inonzi -yakagadzirwa nevanhu mamiriro ekunze iyo inomutsa yakanyanya kutarisisa uye chiitiko. Asi zvakare mamiriro ekunze akagadzirwa nevanhu. Iyo yakadzokororwa yeWurzburg yakatiyeuchidza zvakare zvakare mamiriro emamiriro ekunze emunyika.
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 4 mwedzi 3 mwedzi
Kupenga kana kujairika: 10-0
Izvo zvese ndezvekushandisa nhabvu sechishamiso chombo chenyika-inorota nzanga isina mitsara yakaoma, asi mune yemagetsi-kutyaira uye chechikadzi- uye mamiriro ekunze-ane hushamwari uye vashoma-anotarisana akasiyana uye "azere nechikafu".
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 4 mwedzi 4 mavhiki